के पूर्ण अकुपेन्सी भएपछि नयाँ फिल्म रिलिज होलान् ? « Mazzako Online
के पूर्ण अकुपेन्सी भएपछि नयाँ फिल्म रिलिज होलान् ?
नेपाली फिल्म हलमा ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा चलिरहेका छन् । हुनत, सरकारले ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा फिल्म चल्ने दिने निर्णय गरेपछि जम्मा २ वटा रिलिज भएका छन् । एउटा यस्तो प्रेम कहानी र गोर्खे । दुबै फिल्मले दर्शक पाएनन् । यसैले कहिलेकाही त ५० प्रतिशत अकुपेन्सी पनि धेरै देखिएको छ ।
तर, महंगो बजेटमा बनेका, हलमा दर्शक तान्न सक्ने अपेक्षा गरिएका फिल्मले प्रदर्शन मिति तोक्न सकेका छैनन् । ५० प्रतिशत अकुपेन्सी सरकारले नहटाएसम्म फिल्म रिलिज गर्न सक्ने वातावरण छैन । यसैले पनि शत प्रतिशत अकुपेन्सी नभएसम्म नयाँ फिल्म रिलिज हुन नसकेका फिल्मीकर्मी बताउँछन् । सरकारसँग शत प्रतिशत अकुपेन्सीका लागि कुरा भैरहेको र चाडै नै शत प्रतिशत अकुपेन्सीमा हल संचालन हुने तर्क फिल्मीकर्मीको छ ।
महंगो बजेटमा फिल्म बनाएपनि ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा फिल्म रिलिज गर्दा निर्माताको रकम उठ्न सक्ने अवस्था छ्रैन । अब, चैत्र २७ गते मात्र तीन वटा फिल्म रिलिज हुँदैछन् । मनसँग मन, कृष्ण लिला र लप्पन छप्पन २ । यी तिन फिल्म रिलिज अघि नै शत प्रतिशत अकुपेन्सीमा फिल्म रिलिजका लागि पहल गर्ने फिल्मीकर्मी बताउँछन् ।